Fashion ipholiyesta yepikniki ukhuko ingubo quilted kunye wa ...
China fashion ipholiyesta iphakethe kabini ibhegi sasemini
China fashion Polyester zigqunyiwe kupholile ibhegi sasemini
China sasemini ibhegi epholileyo ibhegi umthengisi mveliso
Iinkcukacha Product: 420D ipholiyesta kunye PEVA / ngefoyile ye-aluminiyam lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana kokutya.
Inkcazo: ibhegi yesidlo sasemini / ibhegi epholileyo yasemini / ibhegi yesidlo sasemini yabantwana / itote yasemini
Inkcazo: Ibhegi epholileyo / ipikniki epholileyo ibhegi / ibhegi epholileyo yangaphandle / ipholiyesta ibhegi epholileyo
Iinkcukacha Product: 600D ipholiyesta kunye PEVA / ngefoyile ye-aluminiyam lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana kokutya.
Ipholiyesta kabini isebe lwasemini ibhegi umthengisi mveliso China ukuthengisa yonke OEM
Umgangatho elungileyo wesibini epholileyo yesebe epholileyo ibhegi / Isidlo sasemini itote / igqunyiwe ibhegi sasemini ngesiphatho kabini esivela eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali kwiibhegi ezininzi zohlobo lwasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Umgangatho opholileyo wokufaka i-bag epholileyo / ipikniki ibhegi epholileyo enomtya wamagxa eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali ezininzi kwiibhegi ezininzi zasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Ipholiyesta kwipikniki cooler ubhaka umthengisi mveliso China ukuthengiswa ngokupheleleyo OEM
Umgangatho opholileyo owenziwe ngengxowa epholileyo / ipikniki ibhegi epholileyo enomtya wegxalaba eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali kwiibhegi ezininzi zohlobo lwasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
China fashion ipholiyesta zigqunyiwe ubhaka kupholile imilo ngeenxa zonke ngaphandle
Iinkcukacha Product: 300D ipholiyesta kunye PEVA / ngefoyile ye-aluminiyam lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana kokutya.
China mveliso ipholiyesta ipholiyesta ibhegi kupholile ecaleni umnatha ipokotho
Umgangatho olungileyo wokuphatha ibhegi epholileyo / i-6 inokupholisa ibhegi / ibhegi yesidlo sasemini kunye nomtya ophindwe kabini wase-China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.